Georginio Wijnaldum बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू Georginio Wijnaldum बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम उपनाम हो। "Gini"। हाम्रो Georginio Wijnaldum बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइव्यापी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उहाँको बारेमा धेरै अफिस तथ्यहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले क्यारियरको बारेमा चिन्ता छ तर केहि जर्जिनियो विजेनेल्डमको बायोलाई विचार गर्नु पर्ने कुरामा धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Georginio Wijnaldum Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
Georginio Gregion Emile Wijnaldum नोभेम्बर 11 को XNumXth दिन मा पैदा भएको थियो। उनी आफ्नो आमा, माउरेन विज्नेल्डम र बुबा, रमोन वान ला परेरा रोटरडैम, दक्षिण होल्यान्डमा उठाइयो।
जब उनी6वर्ष पुरानो भए, तिनका आमाबाबु, जो एरोरो-सूरीमस वंशका हुन्, उनीहरूले आमालाई एम्स्टर्डममा जान थाले परिणामस्वरूप तलाकमा गए। तथापि, विजेनिल्डम रटरडमडमा रहन निर्णय गरे र उनको दादी संग चले गए, जहाँ उनी आफ्नो बचपन को बाँकी रह्यो।
विज्नेल्डमको सानो वर्षमा, उनी फुटबलमा रुचि देखिनन्। उनले कहिलेकाँही बल संग खेलाडी वा टिभीमा फुटबल हेरे। उनको महत्वाकांक्षा एक जिमनास्ट या एक्रोबेट थियो। यो योजना बदल्यो जब विज्नेल्डमका भतिजाले उनलाई सोधे कि उनको साथ स्पार्टा रोटरडैमको उद्घाटन दिन आउछ। उनले विश्वास गरेन कि तिनले के देख्यो ..."फुटबलको सुन्दर खेल सबै यसको Glory "। युवा युवालाई हेरेर पछि बाँच्न चाहँदैनन्। विज्नेल्डमम स्पार्टा रोटरडैम युवा अकादमीमा निमन्त्रणा गरिएको थियो र फुटबलको लागि उनको माया बिस्तारै बढ्न थाले। उनीहरूको युवा टोलीको सदस्य बन्ने समय सकिएन।
Georginio Wijnaldum Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -प्रसिद्धिको कारण
सात मौसमको लागि स्पार्टा रोटरडैमको लागि खेल्न पछि विज्नेल्डमले नयाँ फेयनेनोर्ड प्रस्ताव को स्वीकार्ने निर्णय गरे जहाँ उनले आफ्नो युवा फुटबल क्यारियर पूरा गरे। उनी फुटबल खेलाडिको रूपमा उनको विकासको लागि फिइनेनेर्डको लागि राम्रो थियो र फिइनेनेर्डको दृश्यमा विश्वास थियो।
Feyenoord मा, विजजिल्लम ले एक सफल पीढी संग लेयरो फेर र लुइस पेडोरो संग मिले। उनी एक असाधारण प्रतिभाको रूपमा उभिए। 29 जुन 2011 मा, फेईनेनोर्डको प्राविधिक निदेशकले क्लबलाई PSV संग €5मिलियन मूल्यको सूचित गरेको Wijnaldum को लागि एक सम्झौता सम्झौतामा पुग्यो। फेरि, उहाँले आफ्नो पङ्क्ति बढाउनुभयो र संख्या 10 शर्ट प्रस्तावित गरियो। Wijnaldum, लोकप्रिय उनको बाल शैली द्वारा ज्ञात पिच मा भयानक नेता थियो।
11 जुलाई 2015 मा, विजिनाल्डमले अंग्रेजी प्रीमियर लीग क्लब न्यूकैसल युनाइटेडलाई 5-वर्षको सम्झौतामा सहभागी भएको थियो, जुन £ 14.5 मिलियनको एक रिपोर्टिङ शुल्कको लागि, त्यसलाई माइक एशले स्वामित्वको सबैभन्दा महँगो हस्ताक्षर गर्दै। लिभरपूल रुचि उठ्यो जब उनी उनीहरूको विरुद्धमा खेलको खेलाडीलाई मानिन्छ जब उनी मार्टिन स्क्वार्टेलले आफ्नै गोल गरे पनि आफ्नै एक्सएनएक्सएक्स-एक्सएनक्सक्समा जिते। उनीहरूले सिजनलाई आफ्नो शीर्ष गोल स्केलरको रूपमा प्राप्त गरेपछि उनीहरूले न्यूकोसलको तालिकामा £2मिलियन ड्रप गर्न नसक्ने बताए। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
Georginio Wijnaldum Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
हाई स्कूल मिठाई, उनि अझै पनि अवस्थित छन्। जर्जिनियो विजेनेल्डममा बसोवास लिनुहोस्, जुन बाह्र वर्जीनिया बहादुरसँग मिलेर उनीहरु बाह्र हुनुहुन्थ्यो। एक शक बिना, पूर्ण-लिप्ड रोटरडाम केटी क्लिच-वाग जस्तै केहि छैन। दुवै प्रेमी अझै पनि लेखन को समयमा विवाह को रूप मा अझै सम्म हो।
यदि त्यहाँ कोही छ जो निश्चित रूपमा एक सुन डाइगर छैन भने, यो एम एस ब्राफेस हो। उनी फुटबल-खेलिरहेका पतिको सफलताको बारेमा कहिल्यै कहिल्यै झल्किन्। वास्तवमा, फुटबलका कतिपय पत्नीहरूले आफ्नो बिस्तारमा आइतबार बिहान चर्च सेवा छनौट गर्नेछन्? वर्जीनिया ब्राफ निश्चित रूपले गर्छ, त्यो भगवानको लागि के रूप मा। उनले मुक्तिको लामो बाटो पछि मुक्ति पाउनको लागि शान्ति पाए।
वर्जीनिया ब्राफले आफ्नै उत्पादनात्मक जीवनको नेतृत्व गर्छन्। उनीसँग गहनाको रेखा छ 'स्पार्कल वी'. उनी पनि केहि फिटनेस कार्यक्रम मा बो BodSquad भनिन्छ। विगतमा, उनी दुर्व्यवहारको साथसाथै काम गर्न प्रयोग गर्थे. उनको सोशल मिडिया पानाहरूमा, तपाईं डुबकीको कुनै सुनामी पाउन सक्नुहुनेछ तर प्रायः उनको पति, उनीहरूका छोराछोरी र चर्च सेवाका भिडियोहरू मिल्ने तस्वीरहरू। विजयल्डमले व्यस्त कार्यक्रमको बावजूद सधैं आफ्ना बच्चाहरूको लागि समय पाउँछ।
विजेनल्डमकी श्रीमती वर्जीनियाले अगस्त एक्सएनएनक्सक्समा जेनियन नामक एक केटालाई जन्म दिए। जकियानको जन्म मात्र घण्टापछि आएको थियो विज्नेल्डमम मद्दत गरेको थियो जर्गन क्लोपको साइमन बुकिङमा एक 4-2 को साथ च्याम्पियन्स लीगको समूह चरणहरूमा उनीहरूको स्थान साइड बुक गर्नुहोस्।
डच मिडफिल्डर विजनेल्डमले उनीहरूको सोशल मिडिया खातामा समाचार पोस्ट गरे। उसले भन्यो: "म वास्तवमा तपाईसँग अचम्मको खबर साझा गर्न प्रसन्न छु कि मेरी सुन्दर प्रेमिकाले2मा हाम्रो छोरा जैयन एमिलेट विजेल्डलमलाई जन्म दिए: 22 आज 24-08-17। म मेरो प्रेमिका र हाम्रो छोरा दुवैको गर्व गर्व गर्थें, जो दुवै स्वस्थ र खुसी हुन्छन्। "
Georginio Wijnaldum Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
भर्खरै रिपोर्टहरूले तथ्याङ्कहरू बताउँछ कि विजेनल्डम गायन मूलको हो। उहाँले हालै घानायन नाम हटाउनुभयो "बोटेंग" उनको उपनाम एक लामो समय पहिले। उहाँ एक पटक पारिवारिक नाम जर्जिनियो बोटेंग र नजर्जिनो विज्नेल्डमको साथ गए। उनको आमाको तलाक पछ्याउनु भयो, उहाँले आफ्नो पहिलो नाम (विजेनेलियम) लिनुभयो। तल उनको आमाको फोटो हो।
नाम 'बोटेंग' उनको वाइफफेर को नाम थियो जो घानायन मूल जर्ज बोटेंग को सेवानिवृत्त डच फुटबलर संग सम्बन्धित छ। उनको सौतेदारले मेरो उपनाम दिएका थिए तर उनले आफ्नी आमालाई बिहे गरेपछि विजेनेल्डमले नाम लिइन्। Wijnaldum एक पटक थपियो, "मेरी आमा र मेरो मूल पिता सुरिनामी हुनुहुन्छ त्यसैले मानिसहरूले यसलाई स्पष्ट पार्नु पर्छ।"
भाइहरू: Wijnaldum को दुई साना भाइहरु, जसमध्ये एक, गिलिओलो विजेनेल्डम, हाल फिलिडेल्फिया संघ को लागि खेल्छ।
उहाँसँग एक अर्ध-भाइ, राजीव वान ला पार्रा छ, जुन वर्तमानमा हडेरफील्ड टाउनको लागि खेल्छ।
अन्तमा, उनको सबैभन्दा सानो भाइ, रोजरियो विजनेल्डम, आगामी फुटबलर। रोजगारी आफ्नो ठूलो भाइ, जर्जिनो को बारे मा धेरै भावुक छ।
सम्बन्धित: विज्नेल्डम पूर्व रियल मैड्रिड मान्छे रयस्टन डेंटेहे को चचेरे भाई हो। ड्रेन्चले रियल म्याड्रिड, एभरटनको ऋणमा बिताएको समय बिताएको थियो र पढ्नको लागी एक यात्राको क्यारियर भएको थियो।
Georginio Wijnaldum Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
Georginho Wijnaldum को आफ्नो व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषताहरु छ।
विजिनाल्डमको शक्ति: उहाँ संसाधन, साहसी, भावुक हुनुहुन्छ, सबैलाई साँचो मित्र हुनुहुन्छ।
Wijnaldum's Weaknesses: सीमाहरूलाई धक्का दिंदा उसले ईर्ष्या, गुप्त र हिंसक हुन सक्छ।
कुन विजेनेलमले मनपर्छ: उहाँले सत्य, तथ्यहरू, दाँया, लामो समयका साथीहरू र आफ्ना साथीहरूलाई चिन्ता गर्नुहुन्छ।
कुन विजेनेलमलाई नमनपराउँछ: दिशानिर्देश मान्छे, रहस्य र निष्क्रिय व्यक्तिहरूलाई खुलासा गर्दछ।
सारांशमा, विज्नेल्डम भावुक छ र उद्दारवादी व्यक्ति छन्। उहाँ दृढ र निर्णायक हुनुहुन्छ। उहाँ कसैलाई हुनुहुन्छ कि जब सम्म उसले सत्य पत्ता लगाउँछ तब सम्म अनुसन्धान गर्नेछ। विजिनाल्डम पहिलो छोरा र एक महान नेता हुनुहुन्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो जर्जिनो विजनेल्डम बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।
स्टीभन बर्ग्विजन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
डोनेएल मालेन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
कोलास-जनवरी हंटेलार बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फ्रेनकी डे जोंग बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
नाथन एके बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य